Ungasusa njani iSIM khadi yakho kwi-Android | I-Androidsis
I-SIM khadi yefowuni yethu ye-Android ivaliwe. Ukuze uyivule, sisebenzisa ikhowudi yayo yePIN, ethi isinike ukufikelela kwifowuni ngendlela eqhelekileyo. Nangona kukho abasebenzisi ekufuneka beyisebenzisile le PIN iyacaphukisa, kodwa sinethuba lokuyiphelisa. Ukwenza oku, kufuneka sisuse isitshixo seSIM.
Yinto abasebenzisi abaninzi abangayaziyo, kodwa esinokuyenza kwifowuni yethu ye-Android ngaphandle kwengxaki ezininzi. Emva koko siza kukubonisa amanyathelo ekufuneka siwalandele kule ndlela ukuze sikwazi ukuyenza, njalo njalo susa iqhaga kwiSIM khadi yethu.
Kuba iifowuni ze-Android ngoku zinezinye iinkqubo zokhuseleko Ukuyithintela, ikhowudi yePIN ayisadingeki kubasebenzisi abaninzi. Elona candelo lililo kukuba sinesakhono sokuyisusa, kungoko sisusa olu vimba. Ke, uya kuba nekhowudi enye yokuvula kwifowuni yakho.
Into enokufezekiswa kwezi fowuni ze-Android zine I-SIM yesibili okanye nge eSIM entsha. Le yinto enokuba yiyo Uncedo olukhulu xa sitshintsha ifowuni, kwaye umzekelo silibale i-PIN. Apha ngezantsi sichaza onke amanyathelo ekufuneka siwalandele malunga noku.
Susa iqhaga leSIM khadi
Kuba siza kususa isitshixo seSIM khadi, kufuneka sibe nenye inkqubo efowunini, ukuphucula ukhuseleko lwayo. Ngale ndlela, ngoku sinezinto ezimbalwa esinokukhetha kuzo, ezinje nge ukukhusela iminwe, ugcino oluntsonkothileyo okanye ukulandelela ifowuni. Ezi ntlobo zemisebenzi zibalulekile, kwaye kufuneka sizisebenzise.
Nje ukuba sazise olunye ulawulo lokufikelela kwifowuni yethu ye-Android, sinokuqala inkqubo. Le yinto eya kuba luncedo kuthi ukuba sitshintsha amakhadi rhoqo, ngenxa yoko, inkqubo yotshintsho iya kuba lula kakhulu, ukongeza ekungayikhumbuleni le khowudi yePIN ngalo lonke ixesha. Ilula ngokwenene. Ewe kunjalo, kuxhomekeke kuhlobo lwenkqubo yokusebenza onayo, okanye uphawu lwefowuni yakho, kunokwenzeka ukuba la macandelo siwakhankanye apha ngezantsi kwinkqubo iya kuba nelinye igama, okanye indawo ayifani. Kodwa la manyathelo aya kusinika umbono ocacileyo wento ekufuneka siyenzile ukuze sisuse isitshixo seSIM.
Kufanele si faka useto lwefowuni yethu ye-Android. Ngaphakathi kuseto kufuneka sijonge icandelo lokhuseleko. Singena kuyo, kwaye apho kufuneka sijonge icandelo elibizwa ngokuba yiSIM Lock. Kuyo sifumana ukhetho kuluhlu olubizwa ngokuba yiBlock SIM khadi, nolukhetho ekufuneka silusebenzise ukuze sikwazi ukususa ibhloko ekuthethwa ngayo. Siza kucofa kolu khetho. Kwezinye iifowuni sifumana eli candelo kuseto oluphambili.
Ke ifowuni yethu ye-Android iya kusicela ukuba sifake iPIN yekhadi, ukuze uqhubeke nenkqubo. Siyazisa kwaye xa sikwenzile oku, inkqubo igqityiwe. Akusayi kuphinda sisebenzise le khowudi yePIN kwakhona ukufikelela kwifowuni yethu. Ukuze utshintsho luqale ukusebenza, kuya kufuneka siqale ngokutsha isixhobo sethu se-Android. Siza kubona ukuba xa uqala kwakhona, ayizukusibuza i-PIN nanini na. Ayizukuza kwixesha elizayo ngalo lonke ixesha sicima ifowuni okanye siyiqalisa kwakhona.
Inkqubo igqityiwe ngale ndlela, ke kulula kakhulu ukuba ungayenza. Ukuba nangaliphi na ixesha utshintsha ingqondo yakho, kwaye uyafuna faka iPIN kwakhona kwisixhoboAmanyathelo ekufuneka elandelwe kwifowuni yethu ye-Android ayafana. Akuyi kuba nzima kuwe ukuyenza, njengoko sele ubonile. Siyathemba ukuba eli nqaku beliluncedo kuwe.
Ifowuni yakho ayiyiboni iSIM? Nazi ezinye izisombululo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Ungasusa njani isitshixo seSIM khadi kwi-Android